सावधान ! भायोनेट इन्टरनेटले ग्राहकलाई यसरी लुट्दैछ ? « Janaboli
सावधान ! भायोनेट इन्टरनेटले ग्राहकलाई यसरी लुट्दैछ ?
काठमाडौ । विज्ञापनमा यति चलाखी छ की लाग्छ नेपालमा तिब्र गतिको इन्टरनेट भायोनेट नै हो । यही लोभमा फसेर नेपाली इन्टरनेट प्रयोगकर्ता भायोनेटबाट लुटिइरहेका छन् । बदमासीपनि यति हद छ की देखाउँन यति धेरै स्पिड यति सस्तैमा भनिन्छ । तर तपाईले इन्टरनेटमा सोचेजस्तो काम गर्न पाउँनुहुन्न । किनकी तपाईले आधाको आधापनि इन्टरनेट पाउन सक्नुहुन्न ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक भायोनेटले विभिन्न शीर्षकमा उपभोक्तासँग अतिरिक्त शुल्क असुली गरिरहेको गुनासो समेत सञ्चार मन्त्रालयमा पुगेको छ । ५१२ एमबीपीएसको सेवा एउटा उपभोक्तालाई कम्पनीले कुनै हालतमा सम्झौता र तिरिएको शुल्क बमोजिम स्पीडमा सेवा दिँदैन । ५१२ एमबीपीएस ब्याण्डविथ तीन जनासम्म ग्राहकलाई बाँड्दा गुणस्तरीय सेवा उपभोक्ताले पाउन सकेका छैनन् । भायोनेटको सिस्टम यही छ ।
यस्तो तथ्य बाहिर आएपछि भायोनेटले उपभोक्ताबाट सरकारी करबाहेक अन्य शुल्क लिन नपाउने गरी बलियो संयन्त्र मार्फत नियमन र अनुगमन थाल्ने तयारी समेत सरकारले गरेको छ ।तोकिएको स्पिड नदिनु कालोबजारी भएकाले ‘भायोनेटले उपभोक्तामाथि कालोबजारी गरिरहेको उजुरी परेका छन् ।
८ डलरमा किनेको इन्टरनेट ४० डलरमा उपभोक्तालाई बेचेर १३ प्रतिशत कर पनि थप्नु भनेको कालोबजारी हो । बलियो सरकार बनेको छ । मन्त्रीले दह्रो खुट्टा टेक्ने हो भने नियमन गरेर इन्टरनेट शुल्क आधाभन्दा तल झार्न सकिन्छ,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । अब त्यो कार्यमा सरकार लागेको छ ।
नेपालको आईसीटी र ब्रोडब्याण्ड नीतिको लक्ष्य भेट्टाउन पनि इन्टरनेटको मूल्य अन्तर्रा्ष्ट्रिय बजारअनुसार समायोजन गर्ने योजना सरकारले बनाएको छ । इन्टरनेट सेवाप्रदायक सस्था भायोनेटले हरेक ग्राहकबाट अवैध रुपमा रकम असुल्दै आएको आएको छ । प्रयोगकर्ताहरुमा आर्थिक भार पार्ने गरी अवैध रुपमा मासिक करोडौं कमाई रहेको छ ।
दूरसञ्चार नियमावलीमा ग्राहकलाई उपलब्ध गराएको दूरसञ्चार सेवा कुनै कारणले बिग्रेमा निशुल्क मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने प्रस्ट व्यवस्था गरिएको छ तर इन्टरनेट सेवा प्रदायक भायोनेटले भने हरेक ग्राहकसँग मर्मत सम्भार र अनुगमनजस्ता शीर्षक राखेर रकम असुलिरहेका उसैले दिने गरेको बीलमा देखिन्छ । ‘ग्राहकलाई उपलब्ध गराएको दूरसञ्चार सेवा कुनै कारणले बिग्रेमा प्राधिकरणले तोकिदिएको स्तरअनुरूप निशुल्क मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने प्रस्ट व्यवस्था गरिएको छ,’ दूरसञ्चार नियमावलीको बुँदा नम्बर १५ को ‘ज’ मा भनिएको छ ।
दूरसञ्चार सेवाको अनुमति पाएका भायोनेट जस्ता इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले नियमावलीविपरीत शुल्क ग्राहकसँग उठाउँदै आएका छन । अन्य इन्टरनेट प्रदायकले पनि यस्तो रकम असूल्दै आएका छन् । भायोनेट यस्तो असुलीमा उच्च छ । ग्राहकसँग नियमविपरीत विभिन्न शीर्षकका रकम असुलेको भन्दै नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत चैत १५ मा सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई शुल्क नलिन सचेत गराउँदै पत्र काटेको थियो ।
प्राधिकरणले पठाएको पत्रमा अनुगमन, प्राविधिक, मर्मत सम्भार, सहायता कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन नपाइने उल्लेख गरिएको भए पनि सेवा प्रदायकहरूले अटेर गरेपछि असार ४ गते पुनः पत्र काटिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । अवस्था फेरीपनि उस्तै छ । यसैले अब प्राधिकरणले एक्सन लिने देखिन्छ ।
विभिन्न शीर्षकमा रकम असुल्ने सेवा प्रदायकको अनुगमन थालिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । अनुगमनका क्रममा विभिन्न शीर्षक राखी रकम लिएको भेटिएको भन्दै प्राधिकरणले भायोनेटलाई पत्र समेत काटेको थियो ।
प्रतीक्षित तथा सर्वोत्कृष्ट रेडमी के२० सिरिज नेपाली बजारमा
काठमाडौं । शाओमी, ग्लोबल टेक्नोलोजी लिडरले आज पूर्वानुमानित तथा प्रतीक्षित रेडमी सब–ब्राण्ड अन्तर्गतको पहिलो फ्ल्यागसिप
नेपाल टेलिकमका फोन र इन्टरनेटमा यस्ता चमत्कारीक अफर
काठमाण्डौ । नेपाल टेलिकमले न्यूनतम प्याकेज रकमबाट महिनाभरी मोबाइलमा जति पनि (असीमित) कुराकानी गर्न सकिने
तपाई दिनमा कति घण्टा मोबाइल चलाउनुहुन्छ ? अध्यन भन्छ जति धेरै चलायो त्यती धेरै…
काठमाडौं । अहिले विज्ञान र प्रविधिको युग हो । अहिले स्मार्ट फोट सबैको हातमा लगभग
विश्वको आकर्षणका रुपमा रहेको ५जी स्मार्टफोन बजारमा
शेन्जेन । चीनको प्रविधि कम्पनी हुवावेले शेन्जेन शहरमा पहिलो पटक फाइब–जी (५जी) स्मार्टफोनको व्यवसायिक प्रयोग